Buluugleey February 14, 2006
Col. C/llahi oo ku soo guuldareystay siyaasadiisa uu ku doonayey in Jowhar uu ka sameysto saldhig lagu kala qeybiyo dadka walaalaha ee Soomaaliyeed, ayaa hadda u soo guryo noqday magaalada Gaalkacyo oo ay wax ka degaan beeshiisa. Ujeedadiisa ugu weyn ee uu hadda ku doonayo inuu qalcad rukumada u dhigo, isagoo adeegsanaya xeeladdiisaan siyaasadeed ee cusub oo ah colaad hurin si siyaasada Soomaaliya aynan marnaba u deign. Waxaa Col. Cabdullaahi ka go’an inta ay gobollada colaada ka jirto inuu ballariyo maamulka gobolka Bari (Puntland) oo Koonfurta Gaalkacy iyo magaalooyinka kale ee ku xariirsan uu hoos keeno.
Tegitaanka koonfurta Gaalkacyo ayaa Col. Cabdullaahi Yusuf waxay kordhisay sumcadiisa siyaasadeed oo gunta hoose u hoobtay marka laga eego heerka qiimeynta. Maxaa yeelay Col. Cabdullahi waxaa ka dareemeysaan hadalladii beerdulucsiga ahaa ee uu la hortagay odayaasha dhaqanka ee ka tirsanaa K. Gaalkacyo.
In kasta oo dad farabadani ay saadaalinayaan hadii uu col.Cabdullahi Yusuf xulufo la sameysto reeraha degan K.Gaalgacyo uu markaasi dowladaha deeqda bixiya uu kaga helayo dhaqaale fara badan, taasna waxay ka gargaareysaa inay markale u sahasho inuu fooda isku geliyo gobolla kale ee sanadahan danbe xasillan. Waxaa kaloo sii dheer in dagaal oogayaasha oo u indha dheer, una dhega furan halka ay ka bidhaameyso ilaha dhaqaale ayaa iyaguna laga yaabaa inay foodda isla galaan.
Col. Cabdullahi oo intii xilka loo dhiibay aan waxba ku soo kordhinin dalka Soomaaliya oo aan ka ahayn colaado ee sababay abaaro fara badan ayaa haatan waxaa laga cabsi qabaa markuu dhaqaalaha deeqda gacanta ku dhigo ay u sahli karto in uu markale dagaal hubeysan ku qaado gobollo fara badan ee dalka Soomaaliya ka mid ah, isagoo ka billabaya K. Gaalkacyo.